Lifestyle Archives - Page4of4- Chelmo News Portal
မနက်အိပ်ယာထပြီး စတွေးသင့်သော အချက်များကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ၀၁. ရွေးချယ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်မှာရှိတယ်။ ဒီနေ့ဟာ ကောင်းတဲ့နေ့၊ မကောင်းသောနေ့ဖြစ်တာတို့၊ ရာသီဥတု သာယာမယ်၊ မသာယာဘူးဆိုတာကို တွေးနေစရာမလိုပါ။ ကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ဖို့ရန် မိမိသာလျှင် အဓိကပါ။ ၀၂. အဖြေက အရေးမကြီးပါ။ လူတိုင်းက ကိုယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန်၊ ကိုယ့်အလုပ်အောင်မြင်ရန်သာ ...
ကိုယ့်မှာဝင်ငွေ အသင့်အတင့်ရှိနေပင်မဲ့ ငွေမစုမိတဲ့လူမျိူးလည်းရှိသလို၊ ဝင်ငွေနည်းပင်မဲ့လည်း သေသေချာချာ စုဆောင်းတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါ။ ၁. ငွေစုစာအုပ်ကို သူ့နေရာနဲ့ သူသုံးပါ ငွေကို အသုံးပြုတဲ့ နေရာအပေါ် မူတည်ပြီး ငွေစုစာအုပ်ကို ခွဲထားရင် ငွေရဲ့လည်ပတ်မှုကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ – လစဉ်သုံးနေတဲ့ ငွေစာရင်း နဲ့ ...
ရေလောင်းချိုးချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ (၁) ခြေထောက်ကနေစပြီး ရေလောင်းချိုးတဲ့သူ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ချက်လွန်ကဲသောသူ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့အတွေးတွေရှိတက်ပါတယ်။သူတပါးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းလက်ခံတက်ဖို့လိုပါတယ်။ (၂)လက်ကနေစပြီး ရေလောင်းချိုးတဲ့သူ သူကတော့ အချွဲသန်တက်ပြီး တယောက်တည်းနေရမှာကို သိပ်ကြောက်တက်ပါတယ်။ဒါပင်မဲ့ ပျော်ပျော်နေတက်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းတွေများများရအောင်ကြိုးစားပါ။ (၃)ခေါင်း၊ဆံပင်ကနေစပြီး ရေလောင်းချိုးတဲ့သူ သူကတော့ ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိတယ်ဆိုတာမှန်းရခက်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကို စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိပြီး လုပ်လိုက်ရင် တစ်ဝက်တစ်ပြတ် ဖြစ်နေတက်ပင်မဲ့ ပြီးမြောက်အောင်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ...